Kilalao ZazaKely: 0-3 volana – Kilonga.com
Bebe, PuéricultureKilalao ZazaKely: 0-3 volana	Inona moa ny atao hoe milalao? Moa va tsy mandeha mikaroka izay manodidina ny tontolo iainana: mandray, mihaino, mizara, mitanisa, manandrakandrana…
Ireto aza misy sombin-kilalao ho an’i zazakely heverinay eto amin’ny kilonga.com fa hanampy antsika ray aman-dreny amin’ny fifidianana kilalao ho an’izy ireo. Mandeha araka ambaratonga izy ireo. Mamakia finaritra o!
1) Saribakoly lamba, nounours na peluche
Rehefa zavatra malefadefaka sy kelikely ka misy orona, vava, maso anankiroa ary sofina azo rohidritina . Mahafinaritra azy ny mikitikitika ireo karazan-damba sy « texture » rehetra.
Fomba hisafidianana azy:
Zavatra kelikely, tsy « rigolote » akory. Tena kilalao maneho sarim-biby no alaina (bitro, alika kely, saka…) na saribakoly. Tandremo fa ny peluche sy ny nounours dia mitàna vovoka be.
2) Ny korintsana, na hochet
Vitany ny mandrazona azy mafy, ny mandraindray azy. Efa mampianatra azy zavatra maro na dia izay fotsiny aza. Vao maika moa avy eo fa misy feo mivoaka avy ao anatin’iny ( grlots, na hira malefaka)
Maivana, misy loko maro, boribory tsara ny manodidina azy. Tandremana tsara mba tsy ho zavatra mora mihendaka ny ao anatiny sao lasa any am-bavany.
3) Ny mobile
Mahafinaritra aminy: Ahafahany manavaka ny loko sy ny bika isan- karazany ary mihaino hirahira malefaka. Io irery ny kilalao tsy miala eo amin’ny champ visuel. Rehefa tsofin’ny rivotra na rehefa miodina ilay « figurine » kely dia manaitaitra azy.
Marevaka tsara. Afaka vonoina rehefa tsy ilaina ny feon-kira. Tandremana sao tsy miraikitra tsara ny fitoerany (amin’ny berceau ohatra, na amin’ny landau) ka mivaha dia mianjera eo aminy. Toy izay ihany koa ny mombamomba an’ireo « joujoux » miantona eo sao rohitiny.
4) Kilalao kely mitsingevana
Manampy azy amin’ny fahatahorany rehefa ao anaty rano izy. Ahafahantsika ray aman-dreny manazava koa fa tsy milentika any anaty rano izy.
Fomba fisafidianana azy:
Amin’ny caoutchouc malefaka (azo aholakolana) ary tsy misy bolongalongana (aspérités) . Rehefa mitsengevana, mi-couine, ary afaka atao arrosoir dia efa mety. Betsaka ny zavatra azo foronina avy amin’ireo hevitra telo ireo avy eo. Ireny kana kely ireny na i Sophie La girafe no tena tsara.
kilonga.commars 30, 2009mars 30, 20090mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, Bebe, hochet, Jouets, Kilalao, mobile, peluche, poupée, puéricultures, zazakely	Laisser un commentaire Annuler la réponse.	Entrez votre commentaire...
Précédent Article précédent : Andeha hody Imahagaga sy Imahalatsa. Lasa anjely kosa i Kamba kely!Suivant Article Suivant: Santé maternelle et néonatale à Madagascar